Alvaro Arbeloa oo isna markiisa ka hadlay xiriirka kala dhexeeya Gerard Pique – Gool FM
(Madrid) 10 Maajo 2016. Daafacyada reer Spain ee u kala safta kooxaha ku coltama La Liga ee Real Madrid iyo Barcelona Alvaro Arbeloa iyo Gerard Pique ayaa marar badan horey isugu weeraray baraha bulshada laakiin iminka hubka waa dhigeen.
Arbeloa ayaa sheegay inuusan wax dareen adag ama ciil u qabin Pique.
33-jirka reer Spain ayaa Santiago Bernabeu loogu sameeyay sagootin qiiro leh kaddib markii uu ka soo muuqday garoonkan kulankiisii ugu dambeeyay ciyaaartii ay 3-2 uga adkaadeen Valencia axadii.
Pique ee isagu dagaalka baraha bulshada ee kala dhexeeya Arbeloa soo cusbooneysiiyay xilli ciyaareedkan markii uu dhaleeceeyay keydka uu markast ku jiro daafaca Madrid ayaa markan soo jileecay isagoona sheegay inuu u qalmay sagootintii loo sameeyay.
Arbeloa ayaa isna dhinac ku dhagin oo soo dhawaansho muujiyay wuxuuna yiri mar uu u waramayay El Larguero: “Wax ciil ah uma qabo Pique, iyadoo ay jirto wixii uu iga yiri aniga.
“Waan xasiloonahay, maxaa yeelay waxaan difaacay kooxdeeda marna ma xushmad dareen Barcelona ama qof kale oo taageerayaasheeda ah.
“Ma qaldanayn, haddii aan qaldanaan lahaa waxaan ku sii socon lahaa qaladka nolosheyda oo idil maxaa yeelay waan sii wadi lahaa inaan sameeyo qaladka. Waxaan isku dayay inaan noqdo qof xushmad badan waxaana aaminsanahay inaan ahaa sidaa.
“Waan sii wadi doonaa inaan difaaco Madrid sida aan horey ugu soo difaacayna waxay ahayd mid xushmad leh.”.
Degmada Xamar Jab Jab oo ku guuleysatay koob lagu soo dhaweynayo sanad guuraddii afaraad ee Idaacadda Gool FM + SAWIRRO